पूर्वमाओवादी नेताहरुद्वार बालुवाटारको भोज बहिस्कार — OnlineDabali
Posted on May 17, 2018 by अनलाइन डबली
काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ‘अन्डरलाइन’ हिजो साँझ रात्रिभोजका आयोजना गर्यो । पार्टी एकताको खुशीयालीमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरेको भोज पूर्व माओवादी युवा नेताहरुले बहिस्कार गरेका छन् ।
नयाँ पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व माओवादी नेता लेखनाथ न्यौपाने र दीपशिखाले भोजको बहिस्कार गरेका हुन् ।
न्यौपानले सामाजिक संजालमा भोज बहिस्कार गरेको लेखेका थिए भने वाइसिएल अध्यक्ष समेत रहेका दीपशिखा भोजमा नगएको तर व्याग्य गर्दै ‘तस्विर आफै बोल्छ’ लेखेर भोजको लागि तयार भएको खानाको फोटा पोष्ट गरे । उनको यो पोष्टले पनि भोज बहिस्कार गरेको पुष्टि गर्छ ।
दुबै नेताले भोजको अावश्यकता नभएको ठम्याउँदै बहिस्कार गरेका हुन् । यी मात्रै करिब एक दर्जन माओवादी नेताहरुले भोज बहिस्कार गरेको बताइन्छ । सहभागीका अनुसार भोजमा नेपाली खानासँगै शिर्ष नेताहरुले रक्सी पनि खाएका थिए ।
यस्तो छ न्यौपानेको स्टाटस
चुनावी राजनीतिक लाइन एउटै भएका र एउटै वंशका दुई पार्टी मिल्ने कुरा सही इमान्दार हुँदा मात्रात्मक परिवर्तनबाट गुणात्मकतातिर पाइला चाल्न सकिन्छ एकता सही, माओवादीमा केही मान्छेहरूको यति डरलाग्दो दादागिरी थियो कि यसको अन्त्य खुसीको कुरा । अब पार्टी संस्थागत र विधिमा चल्छ भन्नेमा आशावादी । हामी लेनिनवादी होइनौं किन लेनिनवाद लेख्ने ? शास्त्रीय रूपमा हामी माक्र्सवादी पनि होइनौं तर नेपाली राजनीतिक बजारमा यो बिक्री हुने अझै सम्भावना बाँकी छ, यसकारण माक्र्सवाद लेख्ने कुरा सही । रूपमा अलिअलि एकताको झल्को आएपनि सारमा र खासमा माओवादीको एमालेकरण नै हो !
माओवादीलाई हाम्रो लाइनमा ल्याइयो भनेर भूपु एमालेजन नमात्तियौं, नयाँ क्रान्तिको दिशा भनेर भूपु माओवादीजन उत्ताउलो नबनौ
केन्द्रीय सदस्यको सपथ खाइयो तर वालुवाटारको रात्री भोजमा गइएन् ।